Semalt: Google विश्लेषकमा ILoveVitaly रेफरल स्पाम के हो?
वर्ल्ड वाइड वेबमा हिट गर्न भूत स्प्याम र रेफरल स्प्यामको प्लेगमा नयाँ मालवेयर - ILoveVitaly समावेश छ। प्राइज, डारोडर, ब्ल्याकहटवर्थ, र सेनोवल जस्तै, यो रेफरल स्पाममा गलत पृष्ठ दृश्यहरू सिर्जना गर्ने रणनीतिहरू हुन्छन्। यसले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातालाई धेरै तरीकाले ट्रिक गर्दछ र अनियमित ट्र्याकिंग आईडीहरू मार्फत तपाईंलाई धेरै ट्राफिक प्राप्त गर्न कोसिस गर्दछ। यसको उद्देश्य भनेको इन्टरनेटमा तपाईंको वेबसाइटको विश्वसनीयता कमजोर पार्नु हो र विभिन्न प्रकारका शंकास्पद गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्दछ।
यदि तपाइँ बिंग, याहू वा गुगल खोज्नुहुन्छ भने, तपाइँले वेबसाइटहरूको सयौंदेखि हजारौं रिपोर्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुनसँग स्प्याम र नक्कली लिंकहरू छन्, र ती साइटहरूको डेटा हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि लगभग सबै साइटहरू निश्चित समाधानको लागि स are्घर्ष गर्दैछन् किनकि उनीहरू सकेसम्म चाँडो रेफरल स्पामबाट मुक्त हुन चाहन्छन्।
Semalt को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy यहाँ यस सम्बन्ध मा एक सजिलो समाधान प्रदान गर्दछ।
ILoveVitaly स्पाम को परिचय
माथिको प्रकाशमा, हामी ILoveVitaly स्प्यामको संक्षिप्त परिचय दिन जाँदैछौं। संदिग्ध र हानिकारक लिंकहरू ब्लक गर्ने तरिकाहरूको बारेमा त्यहाँ धेरै बहसहरू पहिले नै छन्। विभिन्न विवाद इन्टरनेट मा भइरहेको छ। धन्यबाद, गुगलले तपाईको एनालिटिक्स खाताबाट रेफरल स्पाम हटाउन खोज ईन्जिनमा तपाईंको रैंकिंगमा बाधा नपुर्‍याई रणनीतिहरूको एक जोडी प्रस्तुत गर्‍यो।
रेफरल स्प्याम नयाँ शब्द होइन, किनभने विशेषज्ञहरूले यसलाई हालका महिनाहरूमा धेरै पटक वर्णन गरेका छन्। मुख्य रूपमा, यो स्पामको एक रूप हो जुन तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई लक्षित गर्न विभिन्न प्रयासहरू समावेश गर्दछ। ह्याकरहरूले प्राय: तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातालाई तपाईंको साइटको रैंकमा क्षति पुर्‍याउन र खोजी इन्जिन परिणामहरूमा आफ्नै साइटको रैंक सुधार गर्न कोशिस गर्दछन्।
ILoveVitaly तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा विशिष्ट डाटा पठाउनको लागि तपाईंको साइटको ट्र्याकिंग आईडीहरूको प्रयोग गर्दछ। यस ट्र्याकि ID आईडीमा धेरै भाइरस र मालवेयर हुन्छन् र तपाईको वेब सामग्रीको गुणस्तर कम गर्न मूलतः त्यहाँ हुन्छ।
यसका साथै, यो स्पामले प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्रिक गर्दछ र उनीहरूलाई विभिन्न संदिग्ध गतिविधिहरूमा फँसाउँछ, जसले तिनीहरूलाई दुर्व्यवहारपूर्ण लिंकहरूमा क्लिक गर्न अग्रसर गर्दछ। प्राय जसो, अमेजन एफिलियट लिंकहरू हुन्छन् जहाँ तपाईं ILoveVitaly स्पाम द्वारा फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ।
के यो मेरो वेबसाइटको लागि खतरनाक हो?
यो भन्नु गलत हुनेछैन कि रेफरल स्पाम सबै वेबसाइटहरू र ब्लगहरूमा खतरनाक छ। यसले तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टमा नकरात्मक प्रभाव छोड्छ, र तपाईं आफ्नो खातामा गलत विचारहरू देख्नुहुनेछ। गुगलमा रिपोर्ट गर्नु पर्याप्त छैन किनकि तपाईंले फिल्टर पनि बनाउनु पर्छ। स्प्यामिंग लिंकहरूले तपाईंको यातायातको क्वालिटीलाई चोट पुर्‍याउन सक्दछ, धेरै हिटहरू उत्पन्न गर्दछ र तपाईंको बाउन्स रेटलाई धेरै हदसम्म बढाउँदछ। यसैले, हामी भन्न सक्दछौं कि ILoveVitaly तपाईंको वेबसाइटको लागि खतरनाक छ र सकेसम्म चाँडो हटाउनु पर्छ।
ILoveVitaly कसरी हटाउने?
जस्तो कि हामीले पहिले नै उल्लेख गर्यौं कि रेफरल स्पाम वास्तविक छैन, तपाईंले यसको कोड तपाईंको जाभास्क्रिप्ट वा .htaccess फाईलहरूबाट हटाउनुपर्नेछ। तपाईंले फिल्टरहरू सिर्जना गर्नु पर्छ सबै प्रकारका स्पामहरू बाहेकका लागि। २०१ 2015 मा फर्कदै, गुगलले केहि सुविधाहरू घोषणा गर्‍यो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको गुगल एनालाइटिक्स डाटाबाट केही माकुरा र बट्सहरू समावेश गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको खाताबाट ILoveVitaly हटाउन सम्भव छ विभिन्न वेबसाइटहरूका लागि फिल्टरको बिभिन्न प्रकारको सिर्जना गरेर।
भूत रेफरलहरूसँग लडाई गर्दै
यदि तपाईंले गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टमा स्प्याम र रेफरल लिंक याद गर्नुभयो भने, तपाईं चिन्तित हुनुपर्दछ किनकि तपाईंको साइटमा निर्देशित गरिएको ट्राफिक नक्कली छ। नियमित आधारमा भूत सन्दर्भ सन्दर्भमा लड्नु आवश्यक छ। यसका लागि तपाईले गुगलको अद्यावधिक नीतिहरू र सल्लाहहरूको जाँच गर्नुपर्नेछ तपाईको एनालिटिक्स डाटा लाई प्रोजेक्ट गर्न।